के रंग देखि तिमी एक ठोस रंग प्राप्त गर्न सक्छन्?
मानिस को सुरम्य चित्र सक्रिय र प्राकृतिक बाहिर गरिएका गर्न, कलाकार राम्रो छाला रंग बनाउन सक्षम हुनुपर्छ। प्रत्येक कलाकार आफ्नो रहस्य छ मिश्रण रंग को, तर अझै पनि तपाईं सजिलै संग कुनै पनि रंग बनाउन सक्छ भनेर थाह पाउँदा, सामान्य नियम र कानून हो। हामी मिलेर यो कला सिक्न गरौं!
एक ठोस रंग कसरी प्राप्त गर्ने?
तपाईँलाई यो लेख्न निर्णय भन्न गरौं तेल चित्रकला। रंग कस्तो तपाईं एक प्राप्त गर्न हात मा छ गर्न आवश्यक व्यक्तिको छाला रंग? पहिले, तपाईंले whitewash संग शेयर आवश्यकता हो, तर यो बिस्तारै, साना अंश अन्य रंग मिश्रण गर्न आवश्यक हुनेछ। स्वस्थ मानव छाला रंग सधैं हाम्रो छाला को सबै रक्त नली को सानो नेटवर्क permeated किनभने, एक कोमल न्यानो रंग छ। को प्रयोग को लागि, सेतो कागज को पाना लिन धेरै फिक्का जवान महिला सामना गर्न संलग्न र कसरी धेरै फरक पनि कागज को एक निर्जीव सेतो पाना को lightest छाला रंग देख्नु हुनेछ।
त्यसैले, डाइअक्साइड Pigments गर्न आवश्यक ocher, मध्यम पहेंलो, मध्यम रातो जस्ता रंग सँगसँगै हुनुपर्छ, र सायद अझै पनि उपयोगी Sienna वा umber हुन सक्छ। तर तपाईं मात्र छाया imposing र ध्यानपूर्वक मा नवीनतम रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ट्यूब देखि प्यालेट सेतो को एक सानो बिट निचोड, तिनीहरूलाई विलायक फैलाउन र तिनीहरूलाई बिट मिश्रण गर्न ocher, रातो को र पहेंलो। अब प्रयोग यसरी ocher गर्न सकिन्छ, र बाँकी रंग, स्वाभाविक सानो।
छाला रंग विभिन्न रंग
चित्रकला मा, पाठ्यक्रम, यो सबै कलाकार को अंतर्ज्ञान मा निर्भर गर्दछ र आफ्नो मोडेल को अनुहार को रंग, फरक रंग को कुनै तयार बनाएको व्यञ्जनहरु छ। सबै पछि, तपाईं कालो छाला एक मानिस आकर्षित भने, आफ्नो छाला रंग फिक्का untanned मानव को रंग देखि एकदम फरक हुनेछ।
त्यसपछि तपाईं महिला छाला मानिसहरू भन्दा बढी चमकीले र नाजुक टन छ भनेर थाहा गर्न आवश्यक छ। ट्रंक, हतियार र खुट्टा को एक शरीर रंग पनि अनुहार को छाला भन्दा गाढा छन्। शरीर विभिन्न क्षेत्रमा रंग मा भिन्न हुन सक्छन्। चित्रकला त्यहाँ reflexes रूपमा यस्तो कुरा हो। यो नजिकै कि वस्तुहरु रंग स्थलहरू को सतह मा प्रतिबिम्बित गरिएको छ। उदाहरणका लागि, आफ्नो मोडेल उनको टाउको मा रातो टोपी flaunts भने, न्यानो रातो आभा पक्कै तपाईं आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ कि व्यक्ति मा पतन हुनेछ। एक पोर्ट्रेट काम गर्दा यो सबै छलफल हुनुपर्छ।
जब painting कसरी शरीर रंग हासिल गर्न Watercolors संग?
Watercolors धेरै छरितो छन् संग, तर कसैले यो सामाग्री तेल भन्दा गाह्रो लाग्न सक्छ। बिन्दु गर्दा Watercolors भूमिका whitewash काम आफूलाई सेतो कागज पृष्ठभूमि कार्य हो। केदारनाथ पारदर्शी छ किनभने, र यो शीर्ष मार्फत shone तल्लो स्ट्रोक धेरै सजिलै लागू हुनुपर्छ।
अब हामी एक ठोस रंग हुन थाल्छन्। एक प्लास्टिक प्यालेट लिन, यो केही पानी ड्रिप। त्यसपछि एक नरम लोखर्के ब्रश, लिन राम्रो र बिस्तारै यो गीला, धेरै टिप यो केदारनाथ पेंट्स को रातो बक्स मा घिसार्नु। त्यसपछि पानी संग प्यालेट यो ब्रश हलचल, र तपाईं अलिकति पारदर्शी गुलाबी छ। एक सानो पहेंलो थप्न, तर यो ज्यादा छैन, तपाईं एकदम बिट आवश्यक छ। र तपाईं एक पोर्ट्रेट painting सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
पोट्रेट, जसमा आदर्श छाला रंग को उदाहरण। यी चित्रहरु फोटो
रूसी चित्रकला को इतिहास मा राम्रो-चित्रित पोट्रेट छन् कलाकारहरूको धेरै थियो। Roars, Levitsky, पोर्ट्रेट को Bryullov पुनःउत्पादन ... यी चित्रकारों कुनै पनि लिनुहोस् र निम्नानुसार मानिन्छ। के कौशल तिनीहरूले सबैभन्दा कठिन छाला टोन पारित गर्न सक्षम थिए!
यहाँ, उदाहरणका लागि, Marii Lopuhinoy एक पोर्ट्रेट काम गर्दछ वी एल Borovikovskogo। कस्तो अचम्मको अनुहारको रुप रंग, यो महिला र उनको छाला को ताजगी र युवा हस्तान्तरण कसरी कौशलतासाथ! कलाकार को गोप्य unravel गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। उहाँले यो परिणाम हासिल गर्न प्रयोग रंग कस्तो, तपाईं के लाग्छ? मात्र सर्वश्रेष्ठ हातमा एक प्यालेट र ब्रश संग एक Easel बसिरहेको चित्रकला गोप्य को ठूलो मालिकको को unraveling भन्दा झगडा।
संसारको सबैभन्दा महंगा चित्रकला
Aivazovsky र आफ्नो अनन्त कथा: "काला सागर" को तस्वीर
कसरी Bezzubik आकर्षित गर्न? पाठ चित्रकला
व्यवसाय Illustrator: लुकेको छ सबै देखाउन
कसरी हेलोवीन कद्दू आकर्षित गर्न?
KIO Emil Teodorovich र तिनका छोराहरूलाई-illusionists
पिटिनमा कसरी सुरुवात गर्ने (beginners को लागि)
अबाकान को शहर कहाँ छ? के क्षेत्र?
स्वादिष्ट र स्वस्थ - जाडो लागि cabbage
संघीय कर र शुल्क: प्रकार र सामग्री
गुप्तांग हड्डी: शरीर रचनाको विज्ञान र शरीर विज्ञान
KB2952664 - कि को लागि अद्यावधिक? म डाउनलोड गर्नु पर्छ?